Google Nexus 5 waa casriga ah Android hore ku shaqeeya ay Android 4.4, KitKat. Waa gacan-ku oo bilaash ah la falalka cod. Mar kasta oo aad rabto in aad u soo dirto fariin, heli tilmaamaha, heli image ah iyo in ka badan, waxaad kaliya dhihi karaa "Ok, Google". Sidee haboon yahay! Haddii aad iska ilaawaan hore iPhone iyo telefoonka dhaldhalaalaan iibsaday, oo ay ku kaydsan badan oo heeso iyo playlists in Lugood, aad u badan tahay in aan la sugi karin si ay u wareejiyo si aad Nexus 5.
Casriga badan ayaa loo isticmaali karaa ciyaartoyda music la qaadi karo sida weyn, oo ah sidii qabow Samsung Galaxy Taxanaha. Haddii aad qabto mid ka mid ah, ku odhan, Galaxy S5, waxaa jira fursad aad rabto in aad ka Lugood wareejiyo music, waxa uu u mar walba madadaalada iyo meel kasta. Laakiin miyaad taqaan sida? Maqaalkani waxa uu diiradda saarayaa aad muujinaya 3 siyaabo sahlan ku saabsan sida loo ka Lugood wareejiyo music si taxane Samsung Galaxy. Waa kuwee jidkoodu wuxuu u noqon lahaa mid aad ugu jeceshahay?
Habka 1. Isticmaal Wondershare TunesGo si ay u gudbiyaan music Lugood in Samsung Galaxy Taxanaha
Habka 2. Isticmaal Samsung Kies in Download Music ka Lugood in Samsung Galaxy S5 / S4 / S3 / S2 / S
Habka 3. Raadi Lugood Media Folder iyo Copy Lugood Music in Samsung Galaxy S4 / S5 / S3 / S2 / S
Maxaa dhacaya haddii aad doonaysid in aad playlists iyo sidoo kale music wareejiyo ka Lugood in Samsung Galaxy S3 / S5 / S4 / S2 / S? Maxaa dhacaya haddii aad doonaysid in aad ka Samsung Galaxy wareejiyo music in Lugood? Waxaan ku talinaynaa in la Lugood awood badan loox Samsung oo software kuu waco. Waa Wondershare TunesGo (Mac) ama Wondershare TunesGo (Win) waa software-ka kugu habboon. Waxay ku siisaa awood ay ku wareejiso Lugood music, playlists, filimada, Lugood U, podcasts iyo TV muujiyaa in Samsung Galaxy ee ka mid click. Waa kuwan sida ay u shaqayso. Iska akhriso on.
Tallaabada 1. qalab Connect Samsung Galaxy si Mac ama PC iyo ordi software ah. Ka dib markii loo aqoonsan yahay, waxay muujinaysaa doonistaada qalab Samsung Galaxy ilaa ay suuqa kala hoose.
Tallaabada 2. Sida caadiga ah, Lugood si toos ah u socon doonaa. Haddii aan, waxay u ordaan naftaada.
Tallaabada 3. Guji ka nidaameed tab. Sax sidoo kale maktabadda oo Dhan ama playlists soo xulay si ay u doortaan waxa aad rabto si ay u gudbiyaan. Ka dibna riix nidaameed si ay u bilaabaan kala iibsiga. Marka ay complete, audio Lugood iyo video noqon doonaa qalab Samsung.
Samsung Kies, sameeyo Samsung, waxay maamushaa photos, music, videos oo badan oo ku saabsan taxanaha Galaxy Samsung ka computer lacag la'aan ah. Waxaa si toos ah syncs oo dhan music ka Lugood iyo dhamaan galalka kumbiyuutarka in Samsung Kies, oo markaas kuu soo gudbin karaa si taxane Samsung Galaxy. Hoos waxaa ku tutorial sahlan ku saabsan sida loo download music ka Lugood si taxane Samsung Galaxy adigoo isticmaalaya Kies. Tan iyo markii uu shaqada Windows iyo Mac version si la mid ah, halkan ayaan kaliya qaadan version Mac sida isku day ah.
Tallaabada 1. Waxaad tagtaa website-ka Samsung ay u soo bixi Samsung Kies on Mac . Ku rakib iyo waxa maamula.
Tallaabada 2. koronto ee cable USB ah in ay ku xidhmaan qalab Samsung si Mac. Marka la ogaado, qalab Samsung ayaa la soo bandhigi doonaa galeeysid bidix ee Kies.
Tallaabada 3. Ugu line ugu sareeya, guji File > Import Lugood playlists inay Library . Markaas, hoos buugga Library, guji New playlist . Dhammaan music ee Lugood waxaa jiri doona.
Tallaabada 4. Sax heeso aad doonayay oo guji Transfer in Device .
Maxaa dhacaya haddii aad doonaysid in aad playlists iyo sidoo kale music wareejiyo ka Lugood in Samsung Galaxy S3 / S5 / S4 / S2 / S? Maxaa dhacaya haddii aad doonaysid in aad ka Samsung Galaxy wareejiyo music in Lugood? Waxaan ku talinaynaa in la Lugood awood badan loox Samsung oo software kuu waco. Waa Wondershare TunesGo (Mac) waa software-ka kugu habboon. Waxay ku siisaa awood ay ku wareejiso Lugood music, playlists, filimada, Lugood U, podcasts iyo TV muujiyaa in Samsung Galaxy ee ka mid click. Waa kuwan sida ay u shaqayso. Iska akhriso on.
Ma doonaysaa in la helo hab lagu nuqul music Lugood in qalab Samsung Galaxy aan software kasta? Waxaad isku dayi kartaa habkan haddii aad computer Windows ah leeyihiin. Hadii aad waligaa sax files Copy in Lugood warbaahinta folder markii isagoo intaa ku daray in maktabada ee Lugood, waxaad si fudud u heli karaan dhammaan music Lugood on computer Windows. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in la helo folder warbaahinta.
By default, Lugood warbaahinta folder waxaa badbaadiyey at:
Windows 8/7: C: \_ Users \_ username \_ My Music \_ Lugood \_
Windows XP, C: \_ Documents iyo Settings \_ username \_ Documents My \_ My Music \_ Lugood \_
Windows Vista: C: \_ Users \_ Music \_ username \_ Lugood \_
Tallaabada 1. Tag warbaahinta Lugood ee folder oo waxaad arki doontaa folder Music ah. Waxaa fur oo waxaad ka heli doontaa fayl badan oo la odhan jiray heesaa. Songs badbaadiyey ee fayl kuwan.
Tallaabada 2. Isku qalab Samsung Galaxy si computer Windows. Marka uu ku xiran si guul ah, tag si aad u ogaato drive dibadda adag qalab Samsung Galaxy oo la furo.
Tallaabada 3. Go back to music folder Lugood iyo nuqul ka heeso aad doonayay in qalab Samsung Galaxy.
Waa hab si xor ah u sameeyaan Lugood in Samsung music kala iibsiga. Haddii aad leedahay dhowr songs, oo aad samayn kartaa adiga ku gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad leedahay boqolaal kun oo heeso, aad leedahay si aad u furtid badan oo fayl artist iyo heeso dhoofinta iyaga ka. Sidee daalin waa. Taa ka sii daran, sida Kies, ma awoodi karaa inuu wareejiyo playlists midkood.
Qaybta 4. Isbarbar dhig 3 Hababka Kor
3. Raadi Lugood Media Folder iyo wareejiyo Samsung
Faa'iido 1. Free;
2. Bedelka heeso ka Lugood in qalab Samsung Galaxy; Heeso 1. Transfer, playlists iyo faylasha kale warbaahinta ka Lugood in qalab Samsung Galaxy;
2. Bedelka Samsung Galaxy si Lugood on Mac 1 click;
3. Nadiifi maktabadda Lugood ka hor suuqa kala iibsiga, sida in la diyaariyo ID 3 info iyo tirtirto songs nuqul; 1. Free;
2. Ma u baahan tahay software lahayn,
3. Bedelka heeso ka Lugood in qalab Samsung Galaxy;
Qasaarooyinka 1. ma bedeli karaa Lugood playlists in qalab Samsung Galaxy;
2. Arrimaha Connection; 1. mushaarka; 1. ma bedeli karaa Lugood playlists in qalab Samsung Galaxy;
2. Kaliya shaqeeyaan computer Windows;
Best 4 iTuens Badeli kara ee Android
Top 4 doubleTwist lagu bedelan karo
Alternative fiican Transfer File Android
Top 3 iSyncr lagu bedelan karo
> Resource > Lugood > 3 Hababka si ay u gudbiyaan Music ka Lugood in Samsung Galaxy S5 / S4 / S3 / S2 / S